နိုင်ငံတော် အဆင့် အလေးထား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာတစ်ရပ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာဖြစ်ဟု ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတော် အဆင့် အလေးထား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာတစ်ရပ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာဖြစ်ဟု ??
နိုင်ငံတော်အဆင့်အလေးထားကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာတစ်ရပ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ပပျောက် ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများအရ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ပြောသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အောက်တိုဘာ ၁ ရက်က နေပြည်တော် သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်သည့် (၅၃)နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ် ဖွဲ့နေ့အခမ်းအနား၌ ၎င်းကအ ထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ”အစိုးရ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒ သစ်တစ်ရပ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်အလေးထားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတစ်ရပ်က မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာ ဖြစ်ပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တ ရာယ်ပပျောက်ဖို့အတွက် အစွမ်း ကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အ တွေ့အကြုံအရ မူးယစ်ဆေးဝါးပြ ဿနာကိုထိရောက်စွာကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ခေတ်မီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသော မှုခင်းပုံစံစစ်များနှင့်အကြမ်းဖက် မှုများအား စနစ်တကျကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အဆင့်ဆင့်ကို အရည်အသွေးပြည့်ဝစေ ရေး စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ပေး ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေကပြောသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံသည်ကုလသမဂ္ဂ၏အကြမ်း ဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ၁၉ ခုအနက် ၁၃ ခုတွင်လက် မှတ်ရေးထိုးထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်တွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိသည့်လူ့အသိုက်အဝန်းအဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ရန်အတွက် မှုခင်းများကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ များကို ထိရောက်စွာတားဆီးကန့်သတ်ခြင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏နစ်နာမှုများကိုကုစားရန် အလျော်အစားအနေဖြင့်အကြမ်း ဖက်မှုများကိုနောက်ဆုံးလက်နက် အနေဖြင့်အသုံးမပြုစေရေးစသည့် အဓိကအချက်များကိုဖော်ဆောင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက”လက်ရှိကျင့်သုံးနေ တဲ့ဥပဒေများနဲ့ တရားစီရင်ရေး စနစ်တို့မှာသာ ပိုမိုအားထားခြင်း မပြုဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍအပါအဝင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ အိုးအိမ်နေရာချထားရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးများ၊ မီဒီယာ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုလူ တန်းစားအဖွဲ့အစည်းများကလည်း ကဏ္ဍပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖို့လည်း အထူးအရေးကြီးပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာငါးနှစ် စီမံကိန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှ၂ဝ၂၁ခုနှစ်အထိ တတိယငါးနှစ်စီမံကိန်း၌မူဝါဒနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး၊ တရားစွဲဆိုရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစသည့် ကဏ္ဍကြီးလေးခုဖြင့်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ”မြန်မာနိုင်ငံက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မှုခင်းနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတရားမဝင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ဘင်းစ်စတက်ကွန်ဗင်းရှင်းကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြု ခြင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်လူကုန်ကူးမှုအစီ ရင်ခံစာအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် သုံးအဆင့်ရှိခဲ့ရာ မှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် နှစ်အဆင့်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင်လက်ရှိအဆင့်ထက်မြင့် တက်နိုင်စေရန် အစီရင်ခံစာပါအ ချက်အလက်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ရေးအတွက် ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ် ဖွဲ့နေ့အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာစွမ်းရည်သတ္တိနှင့်စွမ်းဆောင်မှုဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များချီးမြှင့်ခဲ့ရာ ရဲသူရတံဆိပ် ခြောက်ဦး၊ ရဲဗလတံဆိပ် ၃၁ ဦး၊ ရဲသူရိန် တံဆိပ်နှစ်ဦး၊ ရဲကျော်စွာတံဆိပ် တစ်ဦးစုစုပေါင်း ၄ဝ ဦးတို့ကို ဆု တံဆိပ်များချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
နယူးယောက် ဖျော်ဖြေပွဲတွင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုကြောင့် ရော့ခ်စတား Marilyn Manson ဒဏ်ရာရရှိ
ဘာစီလိုနာသို့ အပြောင်းအရွှေ့တွင် မက်ဆီ အရေးပါခဲ့ဟု ပေါ်လင်ဟို ဖွင့်ဟ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌနေရာအပါအဝင် ပါတီခေါင်းဆောင်များအား အသစ်ပြန်ရွေးချယ်
မွန်ပြည်နယ်သစ်ပါတီ လူထုတွေ့ဆုံပွဲ သုံးရက်ကြာ ကျင်းပမည်
မြဝတီတွင် ကားမှန်များကို(ဂတ်စ်)သေနတ်ဖြင့် လိုက်လံပစ်ခွဲနေသူဟုဆိုသူကို ဖမ်းမိ
ရိုက်ကွင်းပေါ်တွင် ဆဲဆိုခဲ့ခြင်းအတွက် ဂျေဆင်စတက်တမ် တောင်းပန်